Tuesday May 26, 2020 - 15:31:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxa loogu yeero beesha caalamka oo dusha sare ka maamula gummeysiga lageliyay dalka Soomaaliya ayaa markale digniin kasoo saaray in dib loogu dhigo doorashooyinka dowladda Federaalka.
Midowga Yurub oo kamid ah dhinacyada sida aadka ah utaageera AMISOM iyo dowladda Federaalka ayaa uga digay Farmaajo iyo Kheyre in ay dib udhigaan doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa Baarlamaaniga ah.
Nicolas Berlanga oo ah wakiilka Ururka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegaya in haddii uu dib udhac ku yimaad doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliya uu dagaal sokeeye ka dhax qarxi doono siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda DF-ka ee hadda xilka haya.
Farmaajo iyo Kheyre ayuu ugu baaqay in aysan marnaba dib udhigin doorashooyinka, wuxuu soo hadal qaaday haddallada kulul ee bilihii lasoo dhaafay kasoo baxayay siyaasiyiin hubaysan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Q.Midoobay iyo Midowga Afrika ayaa horay usoo saaray digniino ku aaddan colaad ka dhalata waqti kororsi ay sameeyaan madaxda hadda haya hoggaanka DF-ka kuwaas oo wajahaya mucaaradad xasaasiyad siyaasadeed leh.